Mauto neMapurisa Anorova Pamwe neKusungwa Vanhu Vakawanda muHarare
Pane vanhu vakawanda vasungwa pamwe nekurohwa muHarare muzuva ranga rakarongwa kuratidzirwa neboka riri kuzvidaidza kuti July 31st Movement ukuwo vanga vari mudzimba vachiti varohwa nemapurisa nemauto.
Mapurisa nemauto anga akapakatira zvombo afuma akavhara nzira dzose dzinopinda pakati pekuguta dzinobva mumisha yose inogara veruzhinji uye vamwe vavo vanga vazere muguta.
Nekuda kweizvi, vanhu vazhinji vanga vachida kupinda mudhorobha vanoti vatadza kupinda mudhorobha zvaita kuti pakati pedhorobha paswere pakazara mauto nemapurisa chete uye zvitoro zvose zvange zvakavharwa.
Mapurisa asunga vanhu vakawanda munzvimbo dzakasiya-siyana dzinogara veruzhinji uye vamwe vasungwa vanosanganisira mutauriri weMDC Alliance, Advocate Fadzai Mahere, nemunyori wemabhuku ane mukurumbira, Tsitsi Dangarembwa, mushure mekuedza kuda kuratidzira.
Vamwe vasungwa mumiriri weHarare West muparamende, Muzvare Joanna Mamombe, Muzvare Cecelia Chimbiri, naMuzvare Netsai Marova avo vanoti vakambopambwa muna Chivabvu.
Vatatu ava vasungwa pamwe negweta ravo, VaObey Shava, apo vanga vachienda kukamba yemapurisa vachida kunozivisa mapurisa kuti vari kutevedzera zvakatarwa nedare kuitira kuti vatongwe vachibva kudzimba dzavo.
Mutauriri weboka revechidiki muMDC Alliance, VaStephen Chuma, vashora kusungwa kwaitwa vanhu ava uye vati zvaitwa nehurumende yaVaMnangagwa izvi ndizvo zvavanga vakatarisira.
Mutauriri wemapurisa, VaPaul Nyathi, vati havasati vave nehuwandu hwevanhu vasungwa muHarare pamwe nemunyika yose vachiti vachiri kubatanidza mashoko ari kubva kukamba dzemapurisa dzakasiyana-siyana.
Vamwewo vanogara mumisha yakaita seGlen Norah neHighfields vakaita saVaTadiwa Mandudzo, avo vane makore gumi nemasere, vanoti vapindirwa mudzimba dzavo nemasoja vakazvindikitwa.
Tete vaVaMandudzo, Amai Nyaradzai Mandudzo, vati vave kutya chirwere cheCovid-19 nehupenyu hwavo panguva imwechete sezvo vachiti havasisina kuchengetedzeka munyika yechipikirwa.
Mumwewo asina kuda kudomwa nezita anogara muCherima mumusha weHighfields anoti vaswera vachiita hwekiti negonzo nemapurisa nemasoja vachitsvaga chingavararamisa.
Mumwe wevanga vari pamberi pehurongwa hwekuratidzira kwanga kuchida kuitwa nhasi uye vari mutungamiri weboka reTajamuka, VaPromise Mkwananzi, vati vacharamba vakavesera hurumende moto kudzamara nyaya yehuori hwavanoti huri munyika yagadziriswa.
Hurumende yaVaMnangagwa yakagara yabuda pachena kuti yakanga isiri kuzobvumira kuti kuratidzira kuenderere mberi ichiti izvi zvaizopinza hupenyu hweveruzhinji panjodzi sezvo paine chirwere cheCovid-19 chiri kuuraya vanhu vakawanda munyika, kusanganisira mumwe wemauto akabatsira mukubviswa kwaVaRobert Mugabe pachigaro muna 2017, VaPerence Shiri, avo vavigwa nwChishanu kuHeroes Acre.